Myanmar Medical Association (MMA) | MMA Central, Conference, Journal
SUPPORTED GROUP FOR ELDERLY DOCTORS (SGED)
HEALTH CARE VOLUNTEER GROUP
LADY DOCTORS GROUP
BUDDHIST DOCTORS SOCIAL GROUP
WRITERS’ SOCIETY OF MMA
ANNUAL MYANMAR MEDICAL CONFERENCE
MOBILE MEDICAL GROUP
MYANMAR MEDICAL JOURNAL
HISTORY OF THE MYANMAR MEDICAL JOURNAL
MMA CME BOOK
MYANMAR MEDICAL ASSOCIATION NEWSLETTER
MMA PUBLICATION HOUSE
LIFE MEMBER FORM
PRO MEMBER FORM
June 20 - June 26
Mental Health Care Project
67th Myanmar Medical Conference JOB OPPORTUNITIES
MYANMAR MEDICAL JOURNAL, Volume 61, No.4, December 2019
MMA NewsLetter, Vol. 14, No.12, December 2019
Myanmar Medical Association CME Survey Questionnaire
Myanmar Gastroenterology & Liver Society of EXECUTIVE COMMITTEE (2019-2021)
Myanmar Radiology Society of Organization Set-up (2019 – 2021)
The communication channel of DHF reporting for GP
National Guideline for Clinical Management of Dengue (2021)
သှေးလှနျတုပျကှေး ၂၀၂၂ နှိုးဆျောခကျြ
Myanmar Medical Association was founded in 1949. It is the only Professional organization of Non -Governmental, non-political and non profit, independent registered medical professional organization in the country. It stands for professional integrity and loyalty. It also helps and serves our people to the upmost. Over 16000 Medical Doctors memberships and approximately 15000, non-members medical doctors are involved ...
Transfusion Medicine Patients Blood Management (29-May-2022)
World Thyroid Day 2022 အထိမျးအမှတျ “သိုငျးရှိုကျရောဂါမြားအကွောငျး သိကောငျးစရာ”
In 2022, the ACORD22 PDW is an online, distance-learning activity (25-30 Sept 2022)
Vacancy for MMA TB Consortium Project (Team Leader (Medical Officer) )
(၃၉) ကြိမ်မြောက် ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
THE MILESTONES OF THE ASEAN FEDERATION OF ENDOCRINE SOCIETIES (AFES)
မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး၏ သဘောထားကွညောခကျြ (1-4-2021)
မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး၏ သဘောထားကွညောခကျြ (4-2-2021)
မွနျမာနိုငျငံဆေးကောငျစီ၊ မွနျမာနိုငျငံဆေးပညာရှငျအဖှဲ့နှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး တို့၏ ပူးတှဲသဘောထားကွငွောခကျြ
(၆၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းညီလာခံတွင် နှစ်စဉ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည့် အကောင်းဆုံးစာတမ်းနှင့်ပိုစတာဆုရှင်များ
Covid-19 ကာကှယျဆေးနှငျ့ပတျသကျသော မေးခှနျးနှငျ့အဖွမြေား အပိုငျး (၁)
67th Myanmar Medical Conference, Virtual Pre-Conference Symposium on covid-19 (photo)
67th Myanmar Medical Conference programme book
67th Myanmar Medical Conference Registration Link
Covid Medical Centre များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအား ဂုဏ်ပြုခြင်း
MMDA webinar on SGLT2i: To Change (or) Status Quo?
Myanmar Medical Association Annual Meeting (2021) Registration Form
67th Myanmar Medical Conference (Second Announcement)
ပွညျသူလူထုအခွပွေု ကိုဗဈကပျရောဂါဆိုငျရာ နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးခွငျးအစီအစဉျသို့ ဆကျသှယျဆောငျရှကျနိုငျ
COVID Medical Center မြားတှငျသှားရောကျအားဖွညျ့ကူညီကွမညျ့MMA Health Heroes
အထူးသတိပွုရမညျ့ ဗီဇပွောငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ
Participation and sponsorship proposal form for 67th MMC
Myanmar Medical Association ( Yangon ) Annual Meeting 2020 Registeration Form
Covid Medical Center မြားတှငျမွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး၏ Volunteer Medical Officer အဖွဈဆောငျရှကျလိုကွသောဆရာဝနျမြားအားဖိတျချေါပါတယျ ပူးတှဲပါ link တှငျလြောကျထားနိုငျပါတယျ
Preliminary Announcement on 67th Myanmar Medical Conference
67th Myanmar Medical Conference 2021 Request for Proposals for Online Platform
Nay Pyi Taw မိဘ ပွညျသူ မြားအတှကျ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျလို့ တိုငျပငျစရာ အခကျအခဲ ဖွဈနေပေါသလား ?
MMA Covid-19 Support Team
တတိယအကွိမျ လူမှုဝနျထမျးကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျးတို့ပူးပေါငျး၍ တနိုငျငံလုံးရှိ သူနာတငိယာဉျအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပရဟိတအဖှဲ့မြားအား training ပေးခွငျး
မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး ပွညျသူလူထုအခွပွေု ကိုဗဈကပျရောဂါဆိုငျရာ နှဈသိမျ့ ဆှနှေေးခွငျးအစီအစဉျ
ကိုဗဈကာလ မိဘပွညျသူ့မြားကွုံတှနေ့ရေသောကနျြးမာရေးပွဿနာမြားကိုတယျလီဖုနျးဖွငျ့ ဆှေးနှေးအကွံပေးခွငျး (မှနျပွညျနယျ)
COVID-19 ရောဂါကုသရနျ သှေးရညျကွညျအလှူရှငျမြားဖိတျချေါခွငျး
THE DOCTOR IN THE TIME OF COVID BY Rai Mra
မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး (EAS) ၏ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု
MMA မှ Volunteer Medical Officer မြား ကို Phaung Gyi Quarentine Centre တှငျ တာဝနျခထြားခွငျး
ဗဟနျးမွို့နယျ လူထုအခွပွေုဖြားနာကုအခမဲ့ဆေးခနျး(Fever Clinic)အား အောငျမွငျစှာဖှငျ့လှဈနိုငျ
Information about BLS ambulance (basic life support ambulance) and overview of community CPR to States and Divisions of ambulance volunteers
Fever Clinic မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး (ပဲခူး)
Fever Clinic ဖြားနာအခမဲ့ဆေးကုခနျး မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျး (မွိတျ)
☆ 𝗠𝗠𝗔 𝗩𝗼𝗹𝘂𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝘀 𝗠𝗢 တို့ရဲ့ စကားသံမြား ☆
Antigen-based RDT Test Kit ကို အသုံးပွု၍ COVID-19 ဓာတျခှဲစဈဆေးခွငျးအတှကျ လုပျငနျးစဉျပွဇယား
MMA မှ Volunteer Medical Officer မြားကို​ချေါယူ​တှဆေုံ့ပွီး Quarentine Centre အခြို့တှငျတာဝနျခထြားခွငျး
မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျးမှ Volunteer Medical Officer မြားကို Quarantine Centre အခြို့တှငျ နရောခထြားခွငျးစာရငျး
မွနျမာနိုငျငံဆရာဝနျအသငျးမှ Covid-19 Medical Center မြားအတှကျ စတေနာ့ဝနျထမျးဆရာဝနျမြားချေါယူခွငျး
MMA Volunteer Medical Officer မြားQuarantine Center မြားတှငျပါဝငျဆောငျရှကျနကွေပါပွီ
Myanmar Medical Association GP Tele Consultation of health issue during Covid Era
Registration form for MMA members who want to participate as volunteer in Covid-19 control
စတေနာ့ဝနျထမျး (Volunteer) မြား register လုပျနိုငျပါပွီ
အစှနျးခြှတျဆေးမှုနျ့ Bleaching Powder (35% Calcium Hypochlorite) ကို အသုံးပွု၍ ပိုးသတျသနျ့စငျဆေးရညျဖြျောစပျနညျးနှငျ့ အသုံးပွုနညျး
ပါးစပျနှငျ့နှာခေါငျးစညျး (mask) ကို စနဈတကြ ဝတျဆငျနညျး
Future of COVID 19 : Clinical Aspects (Live Video)
MMA Mask Boostering Campaign (နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ရေး အင်အားဖြည့်ဆောင်ရွက်မှု) 24.7.2020
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနှင့် Fever Clinic များအကြောင်းကို MNTV Live မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြောကြားခြင်း
MMA conducted Medical Professionalism in the 21st Century (Video file)
(၇၃) ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့မှ တက်ရောက်လွမ်းသူပန်းခွေချ အလေးပြု (19.July.2020)
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းတွင် Audit Review Meeting ပြုလုပ်ခြင်း (17.7.2020)
Role of Zinc in Clinical Practice (Video Link)
ပြည်သူများ လုံးဝ (လုံးဝ) မပေါ့ဆကြပါနှင့်
နီနီဓါတ်ခွဲခန်းမှ Covid-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် အလှူငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ မှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ဓာတ်ပုံ
MINISTRY OF HEALTH AND SPORTS ၏ ဒီနေ့အတွက်သိကောင်းစရာ
COVID-19 ပြန့်ပွားမှုကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အချက် (၄) ချက်ကို မဖြစ်မနေလိုက်နာရန်
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (မျက်စိရောဂါပညာအဖွဲ့)၏ ပြည်သူများနှင့် အသင်းဝင်ဆရာဝန်များသို့ ပန်ကြားချက်
BMANA (Burma Medical Association of North America) donated USD 1000 to MMA Central
ကာကွယ်ဆေးထိုးစုရပ်သို့ လာရောက်သော ကလေးမိဘအုပ်ထိန်းသူများ လိုက်နာရန်
COVID-19 ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version2.0)
Fever Clinics မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စေတနာဝန်ထမ်း ဆရာဝန်တွေအတွက် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသင်တန်း
MMA – Magway Region တွင် Community Based Fever Clinic ဖွင့်လှစ်ခြင်း
COVID-19 အတွက် Pyrex Trading (Zifam) နှင့် United Pharma Col.,td တို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကိုလှူဒါန်းခြင်း
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာ နှစ်စဉ်မိုးရာသီမှာ ဘာကြောင့်အဖြစ်များတာလဲ?
COVID-19 ကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်ရမည့်သူများ လိုက်နာရန်
မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီသည်
Community Based Facility Quarantine တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် (Volunteer) စေတနာဝန်ထမ်းများကို Training ပေးမည့် ဆရာဝန်များ Registration (MMA) ပြုလုပ်ရန်
MMA Training workshop, Hands on PPE
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေး အဓိကသတင်းစကား (၈) ချက်
တိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်း – Expanded Programme on Immunization, Myanmar
Safe Clinic Practice (Video)
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း MASK CAMPAIGN Activity
Community Based Facility Quarantine တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် စေတနာဝန်ထမ်းများကို Training ပေးမည့် ဆရာဝန်များ Registration ပြုလုပ်ရန်
COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (တောင်ငူ) မှ Community Fever Clinic-Taungoo) ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း အများပြည်သူသုံးယာဉ်ကြီး၊ ယာဉ်ငယ်နှင့် အဝေးပြေးကားဂိတ်များတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ (Version 1.0) Update as of 11-5-2020
COVID-19 ရောဂါလူနာအား သယ်ယူပို့ဆောင်မည့် လူနာတင်ယာဉ်တွင် ပါဝင်ရမည့် အခြေခံပစ္စည်းများ
COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကာလအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစကားများ Version 1.0 (update as of 11.5.2020)
SOP for Community Fever Clinic
COVID-19 ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည်သူများတိကျစွာ ဆက်လက်လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြန်ကြားခြင်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းလက်စွဲစာအုပ် (National Volunteer Steering Unit)
နေအိမ်တွင်နေထိုင်ခြင်း (Stay at Home) ကာလအတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရှော့ပင်းမောလ်နှင့် စူပါမားကတ်၊ ပါဆယ်ရောင်းချသည့်ဆိုင်များနှင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ထားရမည့် အချက်များ (Version 1.0)
Infrared (Non-Touch) အပူချိန်တိုင်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းလမ်းညွှန်
COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်လျှော့ချခြင်း မပြုဘဲ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးပါကြောင်း
COVID-19 and GI Symptoms
ပါးစမပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (MASK) စနစ်တကျဝတ်ဆင်ခြင်း
အဓိကသတင်းစကား (၁၀) ချက်
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြပါရန် တိုက်တွန်းပန်ကြားခြင်း
COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ထိရောက်စွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် စည်းကမ်းမဲ့ တံတွေးသလိပ်ထွေးခြင်းနှင့် ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းတို့ကို လုံးဝ (လုံးဝ) ရှောင်ကြဉ်ပါ
နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ …
ကြိုတင်ကာကွယ် အပူဒဏ်အန္တရာယ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည်များကို အခမဲ့မေးမြန်းနိုင်သော “2019” National Call Center for COVID-19
COVID-19 ကို မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ အဓိကသတင်းစကား (၁၀) ချက်
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဈေးဆိုင်များ၊ ဈေးများ၊ ဈေးဝယ်သူများနှင့် ဈေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီများ လိုက်နာရမည့် အချက်များ (Version 1.0)
Guidelines for Community Fever Clinic (22-4-2020)
Fever Clinic များအတွက် SOP/Guideline ချမှတ်ခြင်းနှင့် PPE အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ မိမိနေအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေး (Healthy Stay at Home) အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များ (Version 1.1) (19.4.2020)
Fever Clinic များတွင် တပြေးညီကျင့်သုံးမည့် SOP Guideline PPE အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်မည်
အ၀တ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောနှာခေါင်းစည်း (Cloth Face Covering) နှင့်ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာများ
Facility Quarantine (၂၁) ရက်နှင့် မိမိနေအိမ်တွင် သီးခြားနေထိုင်းခြင်း Home Quarantine ကာလ (၇) ရက်ဆောင်ရွက်သွားရေး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) အမျိုးမျိုးအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမေးများသော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
MMA conducted PPE Hands on Training and Infection Control Lecture for Volunteer Medical Officers (5.4.2020)
COVID-19 Teleconferencing Seminar
Facility Quarantine စခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် Volunteer Medical Officer များကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်
ဒယ်အိုးဆရာတော် Donated to MMA for use of COVID-19 Volunteering
Myanmar Medical Association conducted COVID 19 Awareness Raising Program with the Medical Volunteers (26.3.2020)
အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရမည့်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ (အနှစ်ချုပ်)
COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ခပ်ခွာခွာနေပါ
သင်နှင့်သင်ချစ်ခင်ရသောသူများအား COVID-19 မှ ကာကွယ်ရန်
လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပေးအချက်အလက်များ (နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ -၂၂ ရက်)
COVID-19 လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို မိမိကစ၍ကာကွယ်ပါ
COVID-19 MOHS PPE Guideline
COVID_19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအားအသိပေးပန်းကြားခြင်း နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်၊ (၁၄း၀၀)နာရီ
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း COVID-19 Update အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ ကို https://www.facebook.com/mmacme/videos တွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Online CPD Program ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းဝင် အသင်းသားများအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း
2019 Novel Coronavirus အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်နိုင်ရန် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့မှ (၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွက် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်များ
Novel Coronavirus 2019-nCoV Infection (for Doctors) (30-1-2020)
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့၏ (၂၀၁၉) ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်အစေည်းအဝေး (၂၆.၁.၂၀၂၀) MMA
(၆၆) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းညီလာခံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း(ဗဟို) အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း (၂၀၂၀-၂၀၂၂)
Introductory Editing and Reviewing Workshop (27-11-2019) Photo
Medical Writing Workshop on 25th and 26th November 2019 in MMA Training Centre
သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရေးအဆောက်အဦး၏ Skill Training Lab
Symposium of Coronary Artery Disease for Primary Care Physicians (24 August 2019)
No (249), Theinbyu Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon Region, Myanmar.
Ph : (+95 1) 8380 899
© 2016-2022. Myanmar Medical Association (MMA). All rights reserved. Web Design by NetScriper